के कांग्रेसले ‘हिन्दु राष्ट्र’को बहस चर्काउँछ ?
संविधानले नै धर्मनिरपेक्ष उल्लेख गरिसकेपछि कांग्रेस, राप्रपालगायतका केही नेताहरुले ब्यापक रुपमा विरोध जनाए । नेताहरु एक आपसमा विभाजित भए । यद्यपी, अहिले पनि यो मुद्दामा बहस चलिरहेकै छ । कांग्रेसलाई आफैंले बनाएको संविधानका बारेमा बोल्न कठिन भइरहेको छ तर धर्मका बारेमा बहस भने जारी छ ।
कांग्रेस भित्रकै दिवंगत खुमवहादुर खड्काको खेमाले त हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर देशब्यापी अभियान नै चलायो । अहिले पनि कतिपय नेताहरु ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ पक्षमा लविङ गरिरहेका छन् । महामन्त्री डा. शंसाक कोइराला बेलामौका हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने अभिब्यक्ति दिइरहेका छन् ।